ကထိန်သင်္ကန်း အလှူဒါန နှင့် ကထိန်အကြောင်း သိကောင်းစရာ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
ကထိန်သင်္ကန်း အလှူဒါန နှင့် ကထိန်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Posted by ukkmaung on October 14, 2010 at 10:00am
ကထိနသည် ပါဠိဝေါဟာရဖြစ်ပါသည်။ ကထိနဟူသော ပါဠိစကားလုံးမှ န-အပေါ်အသတ်တင်၍ (န်) ကထိန်ဟု ခေါ်ဝေါ်ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကထိန်ဟူသော စကားလုံးသည်
ပါဠိမှဆင်းသက်လာကာ မြန်မာမှု ပြုထားသော ပါဠိသက်စကားလုံး ဖြစ်ပါသည်။
ခိုင်မြဲ၍အဓွန့်ရှည်သော ကုသိုလ်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။
ကထိန်ကို မြတ်စွာဘုရားသခင်က ကောသလမင်းကြီးနှင့်အဖေတူအမေကွဲ ညီအစ်ကိုများဖြစ်ကြသော ဘဒ္ဒဝဂ္ဂီမင်းမျိုးမင်းနွယ်ဝင်ရဟန်းအပါး(၃၀)တို့ အပေါ် ကရုဏာတော်ထား၍ ပထမဆုံးခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ထိုရဟန်းတော်များသည် ဓုတင်ဆောင် သောအရိယသူတော်စင်များဖြစ်ကြသော်လည်း ရဟန္တာများမဟုတ်ကြသေးပါ။
ထိုရဟန်းများသည် အနာထပိဏ် သူဋ္ဌေးကြီး၏ ဇေတဝန်ကျောင်းတော်၌ သီတင်းသုံးနေတော်မူသော မြတ်စွာဘုရားကို
ဖူးမြော်ပူဇော်ကြရန်အတွက် ၎င်းတို့သီတင်းသုံးရာဇာတိနေရပ်ဖြစ်သောပါဝါမြို့တော်မှ သာဝတ္ထိမြို့ သို့ခရီးထွက်လာခဲ့ကြသည်။
သို့သော်ထိုရဟန်းတော်များသည် သာဝတ္ထိမြို့တော်သို့မိုးရာသီအစ ဖြစ်သောဝါဆိုလတွင် မရောက်ရှိနိုင်ကြပေ။
ထိုအချိန်ကမိုးရာသီကာလတွင်ရဟန်းသံဃာတော်များသည် ခရီးသွားရန် မလွယ်ကူကြပါ။
ထို့ကြောင့်ရဟန်းများသည်ဝါဆိုဝါကပ်ရက်ရောက်နေသဖြင့် ဝါတွင်းသုံးလတွင် သာကေတ၌သီတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့ ကြရပြီးမှ ခရီးဆက်ခဲ့ကြရပါသည်။ သံဃာတော်များသည် ခြိုးခြံကျင့်ကြံတော်မူသော ရဟန်းတော်များဖြစ်ကြသောကြောင့် သင်္ကန်းများစွာပိုင်ဆိုင်ခွင့်မရှိပါ။တိစီဝရိတ်မည်သော သင်းပိုင်၊
ကိုယ်ဝတ်ဧကသီနှင့်ဒုကုဋ်နှစ်ထပ် သင်္ကန်း စုစုပေါင်းသုံးထည်ကိုသာသုံးခွင့်ရှိပါသည်။ မိုးပြင်းများ၊ စပါးခင်းများ ၊
မြစ်ချောင်းများ၊ ကိုဖြတ်သန်းခရီးနှင်ခဲ့ကြရသည့်ထိုရဟန်းတော်များသည် မြတ်စွာဘုရားကိုဖူးမျှော်ရန်သာဝတ္ထိသို့ ရောက်ရှိကြသည့်အခါတွင် ထိုရဟန်းတို့၏သင်္ကန်းများသည် ရွှံ့နွံများပေကျံကာရွှဲနစ်လျက်ရှိသည်။
မြတ်စွာဘုရားသိတော်မူသည့်အခါ ရှေးဘုရားတို့လည်းခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ကြသည့်အတိုင်း ‘‘အနုဇာနာမိ ဘိက္ခဝေ
ဝဿံဝုဋ္ဌာနံ ဘိက္ခုနံ ကထိနံ အတ္ထရိတုံ’’စသည်ဖြင့် အကျိုးငါးပါးတို့ကို ခိုင်မြဲစွာရနိုင်သော ကထိန်ခင်းခြင်းအမှုကို ပါဝေယျကတိုင်းသား ရဟန်းများကို အကြောင်းပြု၍ ခွင့်ပြုတော်မူခြင်းကြောင့် ကထိန်သည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့၏။
မြတ်စွာဘုရားသခင်သည် ရဟန်းများ၏ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုကိုကရုဏာထားတော်မူလျက် အလှူရှင် ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမ များကို ကြီးမြတ်တော်မူသော ကုသိုလ်ကောင်းကျိုးကို အပြည့်အဝရရှိစေနိုင်သည့် ကထိန်သင်္ကန်းများကို ရဟန်းသံဃာတော်များအား
မိုးရာသီကုန်ဆုံးသည့်လပြည့်နေ့မှ နောက်လပြည့်နေ့အတွင်း ကထိန်သင်္ကန်းများလှူဒါန်းဆက်ကပ်ရန်
ကထိနသည် မလှုပ်မရှားခိုင်မြဲခြင်း၏အနက်ကိုဟော၏။ အကျိုးတရားငါးပါးတို့ကို ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့် ‘‘ကထိန’’ကထိန်ဟုဆိုကြ၏။
(၁) (တစ်နည်း)ဝိနည်းနှံ့စပ် မထေရ်မြတ်တို့ ခင်းအပ်ခြင်းရာ ကထိန်သာမှန်စွာမှတ်လိုက်ပါ။ ကုသလေဟိ အတ္ထရီယတေဟိ ကထိနံ [ထရ-သန္ထရဏေ]
(၂) ကောင်းသောခြင်းရာ မင်္ဂလာပေါင်း၊ ဝင်းထိန်ကြောင်း ထပ်လောင်းကထိန်သာ [ဒိဝု-ဒိတ္တိမှိ]
(၃) အာပတ်ညစ်ကြေး၊ အပြစ်ဘေးမှ ကင်းဝေးစေဟု စင်ကြယ်မှု၊ ခေါ်ပြုကထိန်သာ
[ကတိ-ဆေဒနေ ကစ္ဆတီတိ ကထိနံ]
(၄) မြဲမြံခိုင်ခန့် တည်တန့်အကျိုး ရည်မျှော်ကိုး ပွါးတိုးကထိန်သာ [ရုဠီ အနိပ္ဖန္နပုဒ်၊ ကထိနံ ထိရန္တိအတ္ထော။ ကင်္ခါဠီကာသစ်]
(၅) ငြိငြင်မှုကင်း သက်ရှည်ခြင်းဖြစ်၊ ပင်ရင်းသစ်ပင်လို ပမာဆို ခေါ်ဆိုကထိန်သာ [တဋ္ဌ အတိစ္ဆဇီဝနေ-တဋ္ဌတီတိ ကထိနော၊ ကထိနောဝိ ယ ကထိနံ]
ဝဿံ ဝုတ္ထာနံ အတ္ထရိတုံ အနုညာယတေတိ ကထိနံ
ဝိဂြိုဟ်အရ = ပုရိမဝါကျွတ်သောရဟန်းတို့အား ခင်းခြင်းငှါခွင့်ပြုအပ်သောကြောင့် ကထိန်ဟုဆိုပါသည်။
အထက်ပါ ပရိဝါ ပါဠိတော်ကထိနဘေဒ၌ လာသည့်အတိုင်း ကထိန်ခင်းထိုက်သောကာလဟူသည် မိုးလ၏နောက်ဆုံးတစ်လဟုဆို၏။ မိုးဥတု၏နောက်ဆုံးတစ်လကား
သီတင်းကျွတ်လပြည့်ကျော် (၁)ရက်နေ့မှစ၍ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့အထိ
တစ်လသည်သာကထိန်ခင်းအပ်သော ကာလဖြစ်၏။ ထိုကာလတစ်လအတွင်း ကထိန်သင်္ကန်း
ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ကထိန်ခင်းရန် သင်္ကန်းရသောနေ့၌ပင် ကထိန်ခင်းရသည်။
ကထိန်ခင်းခြင်းကို တစ်နှစ်မှာ တစ်လသာ တစ်လတွင်း၌ပင်၊ တစ်ရက်တည်းလည်း
ကျောင်းတိုက်တစ်တိုက်တွင် တစ်ကြိမ်သာ ခင်းအပ်၏။ တစ်နှစ်တွင်
လင်္ကာ**မိုးနောက်ဆုံးလ ၊ ကထိန်ကျ၊ ခင်းရထိုအခါ။ (သံခိပ်)
**သံဃိကစစ် ၊ သင်္ကန်းဖြစ်မှ ခင်းလို့ရ ငါးဝအကျိုးရမည်သာ။
သင်္ကန်းသံဃိ ၊ မဖြစ်ဘိ၊ ခင်းသည့်မမြောက်ပါ။
ကထိန်မအပ် ၊ ကျိုးမမြတ် သိကြများသူငါ။
**ပုရိမဝါ ကောင်းစွာကျွတ်ထ ၊ ပဌမ ပဝါရဏာပြုပြီးခါ၊
သံဃာထံမှ သင်္ကန်းရ ခင်းရကထိန်သာ၊
ပုဗ္ဗကရဏံ ပစ္စု ဒ္ဓံစ ၊ အင်ရှစ်ဝနှင့်ပြည့်ထသူသာ၊
ကထိနာ ခင်းရာ ထိုက်လေမှတ်။ (သံခိပ်)
ကထိန်ခင်းမှုကြောင့် ရဟန်းတော်တို့အား ရအပ်သော အာနိသင်အကျိုးတရားတို့ သည် (၅)ပါးဖြစ်ကုန်၏ ။ ခင်းပြီးကထိန်မနှုတ်မခြင်း ကာလတိုင်အောင် လည်းကောင်း၊
တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်ကျော် (၁) ရက်နေ့မှတပေါင်းလပြည့်အထိ (၅) လတိုင်တိုင်
ထိုကထိန် အာနိသင်အကျိုးတရား ငါးပါးတို့ကို ကထိန်ခင်းသည့် ရဟန်း၊
ရဟန်းတော်များ ရအပ်သော ကထိန်အကျိုး(၅)ပါး
(၁) အနာမန္တစာရ-ထင်ရှားရှိသောရဟန်းကို မပန်ကြားဘဲ ရပ်ရွာအတွင်းသို့ သွားနိုင်ခြင်း
(၂)အသမာဒါနစာရ-အဓိဋ္ဌာန်တင်ထားသော နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကြီးနှင့် ညဉ့်ကင်းနေနိုင်ခြင်း
(၃) ဂဏဘောဇန- [မအပ်မရာပင့်ဖိတ်သည့်] ဂဏဘောဇဉ်ကို ဘုန်းပေးသော်လည်း
(၄) ယာဝဒတ္ထစီဝရ- အဓိဋ္ဌာန်ဝိကပ္ပနာမပြုဘဲ သက်န်းကို အလိုရှိသလောက်
(၅) ယောစတတ္ထစီဝရုပ္ပါဒ- ကထိန်ခင်းရာကျောင်း၌ ဖြစ်ပေါ်သော သံဃိက သင်္ကန်းကို
အတ္ထတကထိနာနံ ဝေါ ဘိက္ခဝေ ပဉ္စာနိသံသာ ကပ္ပိဿန္တိအနာမန္တစာရော၊ အသမာဒါနစာရော ၊ ဂဏဘောဇနံ ၊ ယာဝဒတ္ထ ၊ စီဝရံ ၊ ယောစ တတ္ထ စီဝရုပ္ပါ ဒေါ ၊ သော နေသံ
ဘဝိဿတီတိ။ [မသာဝါ ပါဠိတော်]
ကထိန်အလှူရှင်တို့ ရအပ်သော အကျိုးများ
လင်္ကာ**ကထိန်ဒါန လှူကြသူမှာ ကျိုးငါးဖြာကား သွားလေရာဝယ် အန္တရာယ်ကင်း ၊ ပစ္စည်းရင်းမှာ မီးပြင်းမဖျက်၊ ဆိပ်မတက်ဘဲ ၊ မေ့လျက်ဥစ္စာ ၊ မဆုံးပါရ ၊
ပြိုင်ရှာကြသော်၊ ကိုယ်ကဦးစွာ အရသာသည် ငါးဖြာ ကထိန်လှူကျိုးတည်း။
(က) ကထိန်ဒါနပြုကြသူမှာ ၊ လိုရာခရီးသွားသည့်အခါ
ပိတ်ပင်စီးတား ၊ ဘေးများကင်းကွာ၊
အန္တရာယ်ကင်း ၊ သွားရင်းလွန်ချမ်းသာ၊
(ခ) ကထိန်ဒါန ပြုကြသူမှာ ရပ်ဝေးနယ်ခြား၊
သိမ်းထားဥစ္စာ ဘေးမခ အေးမြလွန်ချမ်းသာ၊
ဒုတိယ - ရအပ်အကျိုးပါ၊။
(ဂ) ကထိန်ဒါန ပြုကြသူမှာ
ကောင်းမွန်ဟာရ ၊ စားရပေတာ
အစာစား ဆိပ်ကား ၊ မသင့်တာ။
(၄) စတုတ္ထ အကျိုး
(ဃ) ကထိန်ဒါန ပြုကြသူမှာ
ရောက်ရာဘဝ ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာ၊
(၅) ပဉ္စမ အကျိုး
(င) ကထိန်ဒါန ပြုကြသူမှာ
ဖြစ်ပေါ်လာငြား ၊ စီးပွားဥစ္စာ၊
လက်ဝယ်ပိုင်ထ ၊ ခိုင်လှသည်သာ။
ဆုံးဘဝ ရောက်ရ နိဗ္ဗုတာ။ ပဉ္စမ ရအပ် အကျိုးပါ။
ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောအလှူဒါနများစွာရှိပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် လှူဒါန်းသူကိုသာ အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေပါသည်။ ကထိန်သင်္ကန်းလှူဒါန်းသော ကထိန
ဒါနသည် လှူဒါန်းသောအလှူရှင်ကိုသာမက အလှူဒါနလက်ခံသော ရဟန်းကိုပါ
ဆုံးစမရှိသောကုသိုလ်အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေခြင်းကြောင့် ထူးခြားသော
အလှူဒါနဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတွင် အလှူရှင်များအနေဖြင့်
ရဟန်းသံဃာတော်များ၏ဝိနည်းသိက္ခာမှ ကင်းလွတ်စေပြီး သက်တောင့်သက်သာ
ဖြစ်စေနိုင်သော အလှူမှာ ကထိနဒါန အလှူသာရှိပါသည် ၊ ထို့ကြောင့်ကထိနဒါနသည်
အလွန်မွန်မြတ်သော၊ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား၏ ချီးကျူးမှုရရှိသော
Today is an auspicious day because we have one of our Burmese festivals asaKathina festival (Kathina ceremony). This ceremony is very
important for Buddhist people. Because this is one kind of ceremony
which should be celebrated on the base of Buddha's teaching. The other
ceremonies in Burma are not all Buddhist ceremonies but communal one.
This Kathina ceremony is specific one for the Monks' well-being and
welfare. At the same time it is held for the welfare and well-being of
Lay person also. Because this Kathina kamma is especially allowed and
laid down by the Buddha in order to observe the Vinaya rules and at the
same time in order to lift up some monastic disciplinary rules. It is
very important to know for the Buddhists.
In the Buddha's life time, as you know, some thirty monks called Bhadda Vaggiya were staying atasmall town called Pava. Before observing of
the Vassa they were expecting to see the Buddha and to listen to the
Buddha's teaching (Dhamma). But unfortunately the observance day is
quite close, too close to proceed to the Savatthi where the Buddha was
staying. Because of that they had to stay at the small town of Pava
throughout the three months of rains retreat, although they were keenly
desirous of seeing the Buddha and listening to the Dhamma talk to
express their attainment. But unfortunately they could not go directly
to the Buddha's residential place, Jetavana Vihara at the town of
These two towns of Savatthi and Pava are not so far from each other, according to Buddha's scripture only 45 yojana away. Then as soon as the Vassa over they proceeded, they set
out for the Savatthi to see the Buddha. At that time the rainy season
was not over at all. Very heavy rains were coming very often because of
that the road and path were very dirty, and full of mud. At that time,
all Bhikkhus had to carry away three robes along their journey, that
is, wherever they travelled they had to carry these three robes without
leaving any of them anywhere. Because of that they had to carry these
robes altogether. Out of them,adouble over robe called Sanghati is
very heavy. On the way, due to the rain, due to the muddy situation
they had to carry this burden of robes with difficulty. Therefore they
were not happy on the way to Savatthi.
Then when they arrived at Savatthi the Buddha usually asked all new comer Bikkhus, namely all visiting Bikkhus "what was attainment you got
during the three months of rains retreat. What about your journey? Is
it happy one or unhappy one?" These are usual questions. Then those
monks, Bhadda vaggiya Bikkhus answered as follows.
"Venerable Sir, we got some attainment of the higher state of Dhamma. But in our journey to Savatthi, to the presence of the Buddha we met
great difficulty due to the rains and muddy situation. Another matter
is that we have had to carry these robes wherever we have to go.
So we were carefully carrying these robes in order not to be wet. Because of that we got somewhat difficulty". Then Buddha laid down O!
Bikkhus in order to release from such an unhappy state, and from such a
difficulty I allow you from today on Kathina robes. In order to hold
Kathina ceremony you have to read Kammavaca and before the reading the
Kammavaca you must choose one of the Samgha members. Then you should
give the Kathinacivara to this entitled monk only. Then this entitled
monk must read Kammavaca.
Only then Kathina ceremony has been properly held. In this way Buddha allowed Kathinacivara and laid down some rules regarding Kathina civara.
Therefore performance of Kathina kamma from that day on until our age
the Kathina ceremony nearly every year had been held.
By performance of the Kathina kamma some kinds of benefit, or result accrued to the Samgha, while the givers, or the donors of
kathinacivara, also have the similar benefits asaresult. Because of
that everywhere, in every Buddhist country Kathina ceremony is being
(3) According to vinaya rules monks are not allowed to accept food for meals which are offered by unsuitable terms (Akapiya vohara). If they
do so they are liable to get an offence (APATTI). Now due to this
Kathina kamma they are free from such Apatti within five months until
the full moon day of the Phagguna month (Tabaung la pye).
(4) Before the laying down of Kathina Kamma monks are not allowed to keep extra robes for more than ten days without making Vinaya
procedures such as Adhithana and Vikappana. If they violate this rule
they are guilty with some offence. Now due to this Kathina Kamma they
get Freedom from that rule within five months.
(5) The Kathina robe should be offered with reference to the Samgha. It must be Samghika, the Samgha's possession. This type of requisite
should be as usual shared with every present Samgha member. But in this
respect of Kathina kamma, this robe is not necessary to be shared with
all present monks except those who observed Vassa in this monastery
without any break. These are the benefits gained by the Samgha. The
similar results will accrue to the donors also.
(1) They will be free from unhappy states throughout their lives. When they makeajourney of whether short or long distance they won't be
hampered by unnecessary preparation for their journey, but will
furnished with all requirement and provisions.
(4) Their possessions will never be spoiled or lost; they will be able to leave their belongings behind without any worry, that is, they will be
(5) The donors of the Kathina robe will always be fortunate their good wills ever be fufilled and they will be successful among many rivals. But many I remind you all ofagreat point. Whenever
you cultivate wholesome deeds you should not allow yourself to be a
prey of attachment.
Venerable Sir. We are offering Kathina robe to the Samgha in order to hold Kathina ceremony by choosing entitled monk among the Samgha,
according to Vinaya rules.
(Myaung Mya Sayadaw) （Myaung妙禪師）
Today is an auspicious day because we have one of our Burmese festivals asaKathina festival (Kathina ceremony).今天是一個吉祥的日子，因為我們有一個緬甸的節日，我們作為一個Kathina節（Kathina儀式）。 This ceremony is very important for Buddhist people.這個儀式是非常重要的佛教人士。 Because this is one kind of ceremony which should be celebrated on the base of Buddha's teaching.因為這是一種儀式，應該是慶祝的基佛的教誨。 The other ceremonies in Burma are not all Buddhist ceremonies but communal one.其他儀式在緬甸是佛教儀式，但不是所有的社區之一。 This Kathina ceremony is specific one for the Monks' well-being and welfare.這Kathina儀式是特定一個僧人的福祉和福利。 At the same time it is held for the welfare and well-being of Lay person also.在同時舉行的福利和福祉的居士人也。 Because this Kathina kamma is especially allowed and laid down by the Buddha in order to observe the Vinaya rules and at the same time in order to lift
up some monastic disciplinary rules.因為這Kathina業力是特別允許，並規定了由佛陀為了遵守戒律規則，並在同一時間，以解除一些寺院紀律。 It is very important to know for the Buddhists.這是非常重要的是知道的佛教徒。
The difficulty of 30 Bikkhus 30 Bikkhus困難
In the Buddha's life time, as you know, some thirty monks called Bhadda Vaggiya were staying atasmall town called Pava.在佛陀的一生，正如你所知，一些僧人稱為Bhadda Vaggiya三十人住在一個小鎮叫帕瓦。 Before observing of the Vassa they were expecting to see the Buddha and to listen to the Buddha's teaching (Dhamma).觀察前的Vassa他們期望看到的佛，並聽取了佛的教誨（正法）。 But unfortunately the observance day is quite close, too close to proceed to the Savatthi where the Buddha was staying.但不幸的是，紀念日比較接近，太接近前進到舍衛城，佛陀住的地方。 Because of that they had to stay at the small town of Pava throughout the three months of rains retreat, although they were keenly desirous of seeing
the Buddha and listening to the Dhamma talk to express their attainment.正因為如此，他們不得不留在小城鎮帕瓦整個三個月的雨季退縮，儘管他們敏銳地切望看到佛陀的正法，聽說話來表達他們的程度。 But unfortunately they could not go directly to the Buddha's residential place, Jetavana Vihara at the town of Savatthi.但不幸的是他們不能直接向佛祖的居住地，Jetavana道場在鎮舍衛城。
These two towns of Savatthi and Pava are not so far from each other, according to Buddha's scripture only 45 yojana away.這兩個鎮的舍衛城和帕瓦也不是遙遠的，取長補短，根據佛陀的經文只有45 Yojana計劃了。 Then as soon as the Vassa over they proceeded, they set out for the Savatthi to see the Buddha.然後，只要對他們進行Vassa，他們列出的舍衛城看到佛陀。 At that time the rainy season was not over at all.當時，雨季尚未結束的。 Very heavy rains were coming very often because of that the road and path were very dirty, and full of mud.大雨來了非常非常往往是因為這條道路和路徑是非常骯髒的，充滿了泥漿。 At that time, all Bhikkhus had to carry away three robes along their journey, that is, wherever they travelled they had to carry these three
robes without leaving any of them anywhere.當時，所有的比丘已帶走三長袍沿著他們的旅程，就是在任何地方旅行，他們攜帶上述三個長袍，不留任何任何地方。 Because of that they had to carry these robes altogether.因為他們已經完全履行這些衣裳。 Out of them,adouble over robe called Sanghati is very heavy.出其中一名叫做Sanghati翻番長袍是非常沉重。 On the way, due to the rain, due to the muddy situation they had to carry this burden of robes with difficulty.在路上，由於下雨，泥濘的情況，由於他們必須攜帶這種長袍難以負擔。 Therefore they were not happy on the way to Savatthi.因此，它們不愉快的方式來舍衛城。
Buddha's question 佛的問題
it happy one or unhappy one?"然後當他們來到舍衛城佛通常要求所有新來的Bikkhus，即所有來訪Bikkhus“你得到了什麼程度，在三個月的雨季退縮。那你的旅程，究竟是一個快樂或不快樂呢？” These are usual questions.這些都是平常的問題。 Then those monks, Bhadda vaggiya Bikkhus answered as follows.然後將這些僧侶，Bhadda vaggiya Bikkhus回答如下。
Allowing Kathina 允許Kathina
"Venerable Sir, we got some attainment of the higher state of Dhamma. But in our journey to Savatthi, to the presence of the Buddha we met great
difficulty due to the rains and muddy situation. Another matter is that
we have had to carry these robes wherever we have to go. “尊敬的主席先生，我們得到了一些程度較高國家的正法。但是，在我們的旅程舍衛城，向在場的佛陀，我們遇到很大困難，由於雨水和泥濘的情況。另一個問題是，我們不得不攜帶上述長袍無論我們得走了。
So we were carefully carrying these robes in order not to be wet.因此，我們進行了仔細攜帶這些長袍，以免被淋濕了。 Because of that we got somewhat difficulty". Then Buddha laid down O! Bikkhus in order to release from such an unhappy state, and from such a
monk must read Kammavaca.正因為如此，我們得到了一定難度“。然後放下哦Bikkhus佛為了解除這種不愉快的
Only then Kathina ceremony has been properly held.只有這樣，Kathina典禮已妥善舉行。 In this way Buddha allowed Kathinacivara and laid down some rules regarding Kathina civara.這樣佛陀允許Kathinacivara，並規定了一些規則方面Kathina civara。 Therefore performance of Kathina kamma from that day on until our age the Kathina ceremony nearly every year had been held.因此性能Kathina業力從那天起，直到我們這個時代的Kathina儀式幾乎每年都有舉行了。
kathinacivara, also have the similar benefits asaresult.通過性能的Kathina業力的一些種利益，或造成累積到Samgha，而度外，或捐助者kathinacivara，也有類似的福利作為一個結果。 Because of that everywhere, in every Buddhist country Kathina ceremony is being held every year.正因為如此無處不在，在每一個佛教國家Kathina儀式每年舉行。
Five benefits for the monk 五福利和尚
The five consequences are as follows;這五個後果如下;
(1) Due to this Kathina Kamma, monk can leave any robe without unnecessarily carrying away when they travel. （1）由於本Kathina業力，長袍的和尚會沒有留下任何不必要的旅行時，他們帶走。
(2) Bikkhus are not usually allowed to go outside without asking for permission to go out fromapresent monk. （2）通常不被獲准Bikkhus外出沒有要求允許外出從目前的和尚。
If he commits this rule he gets an offence.如果他犯這樣的規則，他得到一個罪行。 Now due to the Kathina he frees from such offences.現在由於Kathina他釋放從這些犯罪。
(3) According to vinaya rules monks are not allowed to accept food for meals which are offered by unsuitable terms (Akapiya vohara). （3）根據規則僧侶戒律不能接受的食物提供的膳食是不適合的條款（Akapiya vohara）。 If they do so they are liable to get an offence (APATTI).如果他們這樣做，他們有責任讓犯罪（APATTI）。 Now
due to this Kathina kamma they are free from such Apatti within five
months until the full moon day of the Phagguna month (Tabaung la pye).現在由於這個Kathina業力，他們是從這些Apatti免費五個月內，直到滿月那天，Phagguna月（Tabaung拉卑謬）。
(4) Before the laying down of Kathina Kamma monks are not allowed to keep extra robes for more than ten days without making Vinaya procedures
such as Adhithana and Vikappana. （4）在鋪設上下Kathina業力僧侶不允許保留額外的長袍超過十天不作律程序，如Adhithana和Vikappana。 If they violate this rule they are guilty with some offence.如果他們違反了這個規則，他們是有罪的一些罪行。 Now due to this Kathina Kamma they get Freedom from that rule within five months.現在由於這個Kathina業力得到自由，他們從這一規則在五個月內。
(5) The Kathina robe should be offered with reference to the Samgha. （5）Kathina長袍應提供參照Samgha。 It must be Samghika, the Samgha's possession.它必須是Samghika的Samgha身上。 This type of requisite should be as usual shared with every present Samgha member.這種類型的必要，應像往常一樣分享每本Samgha成員。 But in this respect of Kathina kamma, this robe is not necessary to be shared with all present monks except those who observed Vassa in this
monastery without any break.但在這方面的Kathina業力，這是沒有必要長袍共享與所有在場的僧侶除外觀察Vassa誰在這個寺院沒有任何突破。 These are the benefits gained by the Samgha.這是所得到的好處Samgha。 The similar results will accrue to the donors also.將產生類似的結果向捐助者也。
Five benefits for the donors 五對捐助者的好處
(1) They will be free from unhappy states throughout their lives. （1）他們將在整個國家擺脫不幸的生活。 When they makeajourney of whether short or long distance they won't be hampered by unnecessary preparation for their journey, but will
furnished with all requirement and provisions.當他們的旅程是否短或長的距離，他們將不會阻礙不必要準備為他們的旅程，但將配備所有的要求和規定。
(2) They will have freedom from hindrances of any kind and they will get every inclination fulfilled. （2）他們將不受任何阻礙，他們將得到每一個傾向履行。
(3) They won't be affected by poison or obsession of any ill-treat spells etc. （3）他們將不會受到任何毒物或痴迷虧待法術等
(5) The donors of the Kathina robe will always be fortunate their good wills ever be fufilled and they will be successful among many rivals. （5）捐助者的Kathina長袍將永遠是幸運的良好意願，他們永遠不會fufilled會成功的許多競爭對手。 But
many I remind you all ofagreat point. Whenever you cultivate
wholesome deeds you should not allow yourself to beaprey of
You should do meritorious deed only for the sake of merit but not for the sake of worldly results.你應該做功德只為成全優點，但為了不為世俗的結果。 Or otherwise your good action will be tainted by mental defect.你們的好行為或以其他方式將被污染的精神上的缺陷。
Offering of Kathina robe 招股Kathina長袍
Venerable Sir.尊敬的主席先生。 We are offering Kathina robe to the Samgha in order to hold Kathina ceremony by choosing entitled monk among the Samgha, according to
May we attain happiness, peace and the cessation of all kinds of suffering because of this good deeds.願我們獲得幸福，和平和停止一切種痛苦，因為這身行好事。
Sadhu! 苦行僧！ Sadhu! 苦行僧！ Sadhu! 苦行僧！
Well done! 幹得好！ Well done! 幹得好！ Well done! 幹得好！